Izibani Xenon ngesithuthuthu - okungukuthi, ukufakwa
Njengoba yaziwa, lo headlight kuyinto umthombo wokukhanya zezimoto, ezifana imoto noma isithuthuthu. Cishe ngamunye ngaphambilini ezihlongozwayo headlamp izindlela design ezivamile: ungumthombo wokukhanya, lukathayela uhlobo lwengilazi, ingilazi, futhi icala labo. Lona yonke idivaysi ukukhanyisa emgwaqweni.
headlamp Common abebehamba ngesithuthuthu
On lezi zimoto like isithuthuthu umthombo wokukhanya angenza izibani Xenon. Izimo zethu zihluke kakhulu ezivamile namuhla kungase kube ngesibani esikhipha, isibani hydride metal, LED, ngempela ezithakazelisayo kukhona izibani laser. By the way, kuba uhlobo yokugcina isibani kunenzuzo ngoba inkampani BMW. Esikhathini esizayo esiseduze zihlela ukuhlomisa zonke izimpahla zazo mishini. Njengoba for izibani Xenon, ziye zaba endinganisweni sisetshenziswa yonke indawo. Namuhla Xenon isithuthuthu luvame kakhulu.
Xenon isithuthuthu kanye imoto has omunye isici okuvamile kokubili ongakhetha - izibani arc futhi itholakala igabha. Ligcwele gas ekhethekile okuthiwa Xenon, lapha, eqinisweni, awunika igama lokuthi izibani kuchazwe. Kuyinto kule divayisi ihlinzeka ukukhanya, okuyinto abaseduze yayo isici emini.
Phakathi kwezinye izinto, amadivayisi kangaka iye yasungulwa ngaphambi kwempi yezwe yesibili. Kufanele kuqashelwe ukuthi esetshenziswa kabanzi on izimoto izithuthuthu bona kwaqala ekuqaleni kuka-90-yalolucwaningo kwekhulu elidlule.
Esinye isici Xenon kuyinto ukuqina yayo - yinde, kunokusebenza analogu lokhu isibani.
Xenon ngebhayisikili yakho
Xenon Beka impela umqondo ethembisa. Ubuchwepheshe namuhla ithuthuka ngokushesha Uyi ngekhono elingcono. Ngakho, lezi zimoto ephezulu kuze kube manje, efakwe LED izibani, kodwa ngisho basuke kancane kancane esikhundleni wuhlelo Xenon. Ngakho-ke, ukufakwa Xenon abebehamba ngesithuthuthu namuhla impela inqubo funa. Izinzuzo lolu hlobo izibani kukhona ukukhanya ngempela high, low power ukusetshenziswa, umsebenzi yesikhathi eside.
Ngeke ngokuthi izibani inkungu ukuthi ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana abasemakilasini ehlukile. Futhi uthanda Xenon okulula ilula ukuze uyisebenzise. Endabeni operation lesifanele, bayoba ukukunikeza ukubonakala ephelele endleleni.
amakilasi Hlukanisa sezibani
Lezinhlobo ngabanye ezisebenzayo izibani ama uhlobo Fluorescent. Ngokuphathelene Europe, lapha bajwayele isikhathi eside, kodwa emazweni CIS, bavele emakethe muva nje. Kuze kube manje, babhalisile kuwo wonke amadokhumenti.
Kungani kudingeka lolu hlobo izibani? Ziyakwazi ezidingekayo ukuze wandise ukubonakala imoto noma ngesithuthuthu ngesikhathi sasemini. Kaningi izinto ezinjalo kudidaniswe okuthiwa Ubukhulu, kodwa akufanele ukwenza.
Izinkampani eziningi ukukhiqiza izimoto isikhathi eside kuthathwe ukuze ujike lezi izibani futhi imodeli supply kuphela kubo. Ngokuqondene abakhiqizi isithuthuthu, baye nje ngaqala ukuwasebenzisa kabanzi. Futhi ngempela eziyinqaba, ngoba sonke siyazi ukuthi Bikers abaningi bathanda ukufaka izibani kuze isithuthuthu esinamasondo. Konke lokhu kwenziwa ukuze nidonse ukunaka ngokwamandla abo. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi lezi zibani kufanele avikelwe futhi isikhathi sabo off.
Umangele kanjani sokufaka Xenon isithuthuthu kunikezwa eziningi abantu abafuna ukuba lolu hlobo headlight. Futhi akumangalisi, ngoba kusobala ukuthi zakwazi ukwenza lokho okulindelwe. Ezifana izibani ngcono ukukhanya kwezindaba umgwaqo nokuphepha umshayeli siqu. Xenon Motorcycle kahle zibonwe abanye abashayeli nganoma yisiphi isikhathi.
isithuthuthu Xenon has inombolo enkulu umehluko kusuka kokufaka HID. Ngokwesibonelo, ngeke ukwazi ukufaka isethi ongaphelele Xenon ku imoto yakho. Kuwufanele kokwazi, ngaphezu kwalokho, ukuthi ezinye izinto azisebenzi izithuthuthu, nokufaka kubo akutuseki.
Ngenxa yezizathu wathi, umsebenzisi kumele akhethe kits lezi zinto Kokudubula amabhlogo mncane. Lokho ezinjalo befanele ukufakwa omunye isithuthuthu.
izibani Xenon ngesithuthuthu, intengo kunalokho ezincane (in the ezahlukene ruble 2 000. Per isethi) ngenkathi ifanelekile, is kuyanda bayanda emkhakheni womsebenzi.
Scooter Gilera Fuoco 500: emisha, owawusekelwe impilo
Ngikuphi okuhlukileko kuneGreyidini injini ezine-unhlangothi - a Luhlatiyo
Suzuki Bandit 400 - amaqiniso okusheshayo
Innovations kusukela "Yamaha": watercraft 2014 model ngonyaka
Ithanga isaladi. Ungadliwa bonke bathanda
Uchungechunge oluthi "Wanyamalala '. Abalingisi kanye izindima
Uyini okuthunyelwe ensimini? Field Thumela WWII futhi yesimanje
Nini futhi kanjani ukusebenzisa umlingo amakhandlela amhlophe?
Izikhangibavakashi Guzeriple: izindawo ezithakazelisayo emzaneni
Wen ebusweni - yini okumele ngiyenze?
Fairing of bunny esinezimpondo IsiJalimane ubhiya Wolpertinger
Step by step recipe plums ushokoledi
I okuphakade umbuzo: Yini okungukuthi DPI?
Ushaka izihlahla ezinameva dogfish: umhlali Safe yoLwandle Olumnyama